भोटेकोशि गाउपालिका बोसिसा नुमानाङका ५१ परिवार रहेको स्थान पहिरो उच्च जोखिममा - Megatv
भोटेकोशि गाउपालिका बोसिसा नुमानाङका ५१ परिवार रहेको स्थान पहिरो उच्च जोखिममा
प्रकाशित मिति: १३ बैशाख २०७८, सोमबार १४:३२
भोटेकोशि गाउपालिका वडा नं १ मा पर्ने बोसिसा नुमानाङका ५१ परिवार रहेको स्थान पहिरो उच्च जोखिममा परेको छ । दलित तथा जनजाति परिवारका बसोवास रहेको सो गाँउको माथिल्लो भागमा स्थित डाँडाकाँडा भुकम्प र गत बर्षको बर्षाको कारण धाँजो फाटेको र तल रहेको भोटेकोशि नदिले जमिन कटानि गरिरहेको कारण सो बस्ति जोखिममा परेको स्थानिय बासिन्दा राकेश बिश्वकर्मा बताउनुहुन्छ ।
बाल बालिका र बृध्द ब्यक्तिह? बसोबास गर्दै आएका सो गाँउमा हिउदको महिना सामान्य तरहले बितेपनि बर्खायाममा पर्ने झरी संगै आउने बाढि र पहिरोले गर्दा पुरा गाँउ नै जोखिममा परेको बसिष्टा बिश्वकर्मा बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै, अर्का स्थानिय रामकृष्ण कामि भन्नुहुन्छ “ सरकार साँच्चै निदाएको होइन ? यदि कृयाशिल भएको भए पालिकाको दैलोबाट नै देखिने र पटक पटक गुनासोमा पनि कुनै प्रतिकृया किन नदेखाएको ?” उहाँका अनुसार “आफु र समाजमा अलि जान्ने सुन्ने भनिएका ब्यक्तिह?को सहायतामा स्थानिय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यलय देखि बिभिन्न मन्त्रालय सम्मको ढोका ढ्कढकाइसकेको पनि ६ महिना बितिसकेको छ । कतैबाट आशाको ठुलो पोको पठाइन्छ त कतैबाट समबेदनामा नै टारिन्छ । कतैबाट कुनै आशा नदेखिएपछि पछिल्लो समयमा चर्चित लोकदोहोरी कार्यक्रम संचालक कृष्ण कडेल सम्म आफ्नो समस्या लिएर जाँदा ? दश लाख सहयोग गर्ने बाचा भयो । तर, ३ महिना सम्म पनि कुनै ताँजोपाँजो नदेखिए पछि वडा अध्यक्षको साथमा इन्द्रेणि कार्यक्रमस्थलमा नै पुग्दा भाइ म पछि आँउछु , अहिलेको लागि चिया खाएर जाउ भन्दै ? एक सय ?पैया हातमा राखेर निस्किएको भन्दै सोहि फाइलबाट सो रकम देखाउदै हुनुहुन्थ्यो ।”
जनताको माग ठुलो नभएको र बर्खाको समयमा कुनै सुरक्षित स्थानमा बस्ने ब्यबस्था सरकारले मिलाइदिए आफुह?को समस्या टर्ने सुकमाया बिक बताउनुहुन्छ ।